Fitohanan’ny fifamoivoizana, fanairana samihafa, fivoaran’isa momba ny ‘covid-19’, vavaka amin’ny haino aman-jery - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nisongadina tamin’ny fampitam-baovao samihafa ny fiverenan’ny fiainana andavanandro ho tahaka ny tsy misy hamehana ara-pahasalamana raha tarafina amin’ny fisosan’ny fiarakodia marobe mampisy fitohanana ao an-drenivohitra saika isan’andro. Tsikaritra izany hatramin’ny nampitomboana ny ora fiasana hatramin’ny 5 ora hariva, araka ny nanambaran’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina azy tamin’ny alahady 9 aogositra 2020. Misy ny fitohanan’ny fifamoivoizana an’arabe, ary mifamoivoy tsy misy fanajana izay elanelana iray metatra ny mpandeha an-tongotra ; mbola tsy miasa moa ny taksibe fitateram-bahoaka.
Mbola maro ireo fokontany nahitana olona miandrandra ny tosika fameno sy vatsy tsinjo avy amin’ny fitondram-panjakana taorian’ny fanaovana fanisana vaovao, araka ny re tamina haino aman-jery tsy miankina. Mbola misy ireo nitaraina ho tsy nahazo hatramin’ny 18 aogositra 2020. Miandry !
Fa nanamarika ny zava-misy eo amin’ny fiarahamonina tamin’iny herinandro lasa iny sy tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity ny fisian’ny fanehoan-kevitry ny sokajin’olona isan-karazany momba ny lafim-piainana samihafa, araka ny taterin’ny haino aman-jery samihafa hatrany. Anisan’ireny ny ahiahin’ny sendikan’ny mpampianatra, Sempama, momba ny datim-panadinana nambaran’ny fanjakana hatao amin’ny volana septambra. Mila fotoana hamitana ny taom-pianarana ny mpianatra mialoha ny datim-panadinana raha ny nambaran’izy ireo ka tokony hahemotra ireo daty nambara hanaovana ny CEPE sy BEPC ary Bakalorea.
Nisongadina koa tany Toamasina ny fisian’ny halatra ‘tuc-tuc’ izay nampisavoritaka ny voakasik’izany, izay niharan’ny herisetra. Nitaky ny hahitana ireo mpividy halatra ny tompon’ny fitaovam-pitaterana. Toamasina moa dia efa niala tamin’ny fihibohana araka ny nambaran’ny filoham-pirenena ihany, fa manaraka hatrany kosa ny fepetra amin’ny fisorohana ny aretina.
Eo amin’ny sehatry ny fitsaboana, dia nanapa-kevitra hanao andro firaisan-kina sy fisaonana ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy (Paramed) miasa amin’ny CSB II manomboka ny 19 aogositra ary haharitra telo andro izany. Izany dia ho fanairana ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny fiarovana ireo mpiasan’ny fahasalamana any rehetra any taorian’ny namonoan’ny sasany ny mpiasan’ny fahasalamana tany amina CSB II, tranga tany Miandrivazo sy Ampanihy. Nambaran’ny mpitarika fa ny hetsika momba ny fitakian-tombontsoa dia hatao aoriana.
Anisan’ny nanaitra tao an-drenivohitra ihany koa tamin’iny herinandro iny ny fanagiazan’ny mpitandro filaminana ny bisikiletan’ny olona maro nanao fitaterana satria hoe tsy ara-dalàna. Io moa dia asa niforona ho azy noho ny tsy fisian’ny fitateram-bahoaka amin’ny taksibe.
Momba ny fandaminana ny tsena ao an-drenivohitra dia miverina indray ny kisary anenjehan’ny ao anivon’ny kaominina ny mpivarotra amoron-dalana, ao anatin’ny fandaminana ny tsena. Ny hita dia ny fikisahan-toerana makamaka sisiny fotsiny amin’ny arabe fa tsy dia misy toerana mbola voafaritra hatreto raha ny zava-misy.
Mitohy isan’andro hatrany ny fanomezana ny antontanisa momba ny fivoaran’ny aretina ‘Covid-19’ ao amin’ny TVM sy RNM ary ny televiziona sy radio tsy miankina rehetra. Mpitondra teny ofisialy moa ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle. Niova ny fomba fanomezana ny tarehimarika tao ho ao ka tsy naseho intsony ny ‘courbe’. Ny filazana ny isan’ny tranga vaovao, ny sitrana sy ny am-pitsaboana, ny tranga sarotra ary ny maty no asongadina. Hita ho mihena ireo am-pitsaboana, mitombo hatrany ny sitrana. Teo amin’ny 91,13% ny tahan’ny fahasitranana amin’ireo mitondra ny tsimokaretina voatily raha ny nambara tamin’ny 18 aogositra. Miisa 173 ireo lavo tamin’ny 18 aogositra raha 151 izany tamin’ny 10 aogositra. Miainga amin’ireo nanaovana fitiliana ny antotanisa izay miaka-midina tao ho ao, tsy mahatratra arivo fa manodidina ny 700-800 na latsaka aza indraindray. Manantitra hatrany ny Profesora Vololontiana fa mbola ilaina ny fanarahana ny ‘gestes barrières’ rehetra.
Eo amin’ny ara-panahy dia mitohy ny fandefasana fotoam-pivavahana amin’ny radio sy televiziona isaky ny alahady toy ny karakarain’ny FFKM alefa amin’ny TVM sy ny RNM. Eo koa ny an’ny haino aman-jery tsy miankina, anisan’izany ny an’ny RDB sy ireo radion’ny diosezy, ary ny an’ny IBC radio sy fahitalavitra.
Taranja ady totohondry : Nahazo mpanazatra sy mpitsara vaovao ny teto Analamanga - il y a 21 heures
Hoy ny haino aman-jery : Ny herinandro voalohany amin'ny volana aogositra 2021 - il y a 1 moi